Hevitra fitsangatsanganana ambony hijerena ny Himalaya Indiana
Ny Himalaya tsy manam-paharoa angamba no fanomezana tsara indrindra ho an'ny olombelona. Ity toerana miboiboika ity dia fanoharana voajanahary ny amin'ny tena mitovy amin'ny paradisa. Manomboka amin'ny ala mikitroka ka hatrany amin'ny lohasaha mihoa-pampana, manomboka amin'ny faritra tropikaly tsy milamina ka hatramin'ny fandresen-dahatra maharesy lahatra, manomboka amin'ny karazan-javamaniry isan-karazany ka hatramin'ny tontolo manjombona, ny fahatongavan'i Himalaya dia manana ny zava-drehetra. Raha toa ka, na inona na inona mety hitranga, dia afaka mitsidika ny Himalayas indray mandeha ianao dia te-hahita ny antony ahafantarana azy ho paradisa eto an-tany. Mandeha any amin'ny fanjakan'i Himalayas izahay isaky ny gaga ny fomba tsy takatry ny saina no nanomezan'ny zavaboary an'ireny faritra ireny amin'ny hatsarana sy ny fananana. Zavamaniry virjiny tsy misy fiafarany an-kilaometatra maro, ny rivotra tsy misy pentina feno oksizenina, ny rano be mineraly avy amin'ny reniranon'ny tendrombohitra, ny rakotra voninkazodia ary ny kirihitra frezy — tampoka dia fiainana tsy manam-petra izany amin'ny ankapobeny!
Toerana vitsivitsy eto amin'ity planeta ity dia afaka manintona anao toy ny Himalayas. Ny iray amin'ny toerana hafahafa tsirairay dia manome aingam-panahy anao ho any isaky ny vanim-potoana. Na ahoana na ahoana, dia iray monja amin'ny toerana hafahafa tsirairay no Himalaya. Toerana fialan-tsasatra any Himalayas no fonenan'ny miavaka, mifanohitra amin'ny faritra ara-panatanjahan-tena hafa eto an-tany. Nandritra ny an'arivony taona maro ny Himalaya dia nanana lanja lehibe ho an'ny vondron'olona any Azia Atsimo, araka ny taratry ny asa sorany, ny folklore ary ny fivavahana.
Nanomboka tamin'ny fotoana taloha dia nisarika ny sain'ireo mpihanika tendrombohitra any India, izay nanoratra ny anarana Sanskrit Himalaya — avy amin'ny hima ("lanezy") sy alaya ("fonenana") ny tsanganana be glaciated - ho an'io rafitra tendrombohitra mahavariana io. Amin'izao fotoana izao, ny Himalayas dia nanolotra ny fientanam-po tsara indrindra sy ny fitsapana tsara indrindra ho an'ny mponina tendrombohitra manerana izao tontolo izao. Ankafizo toy izany koa ny fahasahisahian-dry zareo any amin'ny Himalayas toy ny dia, ny sambo, ny ski, ny fianihana tendrombohitra ary ny maro hafa tahaka izany. Ho an'ireo tia an-tendrombohitra, ny Himalaya dia heverina ho toerana ambony voatendry amin'ny maha-zava-dehibe ny zavaboary.
Ny toerana fialan-tsasatra any Himalayas dia ahitana farihy malaza ihany koa, mahatsiaro ny Farihy Shey-Phoksundo ho an'ny valan-javaboary Shey Phoksundo ao Nepal, Farihy Gurudongmar, any Sikkim Avaratra, Farihy Gokyo ao amin'ny faritra Solukhumbu ao Nepal ary Farihy Tsongmo.
Mila ianao Visa e-Tourista any India (e India or Visa Indiana Online) mba handray anjara amin'ny fahafinaretan'i Himalaya amin'ny maha mpizahatany vahiny any India. Raha tsy izany, afaka mitsidika an'i India ianao amin'ny a Visa any India e-Business ary te hanao fialam-boly sy fitsangantsanganana any avaratr'i Inde sy any am-pototry ny tendrombohitra Himalaya. ny Fahefana misahana ny fifindra-monina Indiana mamporisika ny mpitsidika any India hangataka fangatahana Indian Visa Online (e-Visa any India) fa tsy mitsidika ny Kaonsily indianina na masoivoho indiana.
Fampiharana Visa Tourist India